सरकारबाट बाहिरिने समाजवादी पार्टीको तयारी
डिबी खड्का सोमबार, कात्तिक २५, २०७६, १६:२०
काठमाडौं– समाजवादी पार्टी नेपालले उपनिर्वाचन लगत्तै सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको सम्बन्ध बिग्रदै गएपछि बाहिरिने तयारी भएको हो।
संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चासो नदिएको विषयमा पहिल्यैदेखि पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान मन्त्री यादव असन्तुष्ट छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नियमित कामकारबाही समेत प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेप बढ्दै गएपछि सरकारबाट अलग्गिने तयारी गरेको समाजवादी पार्टीका एक केन्द्रीय नेताले बताए। ती नेताले भने, ‘अहिलेकै अवस्था रह्यो भने उपनिर्वाचनपछि हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौं।’
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका साथै अन्य विषयमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष चासो दिने गरेका छन्। जसका कारण सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग उपप्रधानमन्त्री यादवको सम्बन्ध सुमुधर छैन। पछिल्लो समय असमझदारी झन्–झन् बढ्न थालेको छ। सरकारबाट बाहिरिने विषयमा पार्टीमा कुरा चलेको बताउँदै समाजवादीका एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो (स्वास्थ्य) मन्त्रालयको सचिव त पाँचवटा परिवर्तन गरिदिनुभयो । यस्तो अवस्थामा कसरी सहेर बस्न सकिन्छ।’
नियुक्ति, सरुवा र बढुवा आफू अनुकुल हुन नसक्दा स्वास्थ्यमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको महशुस उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री यादवले गरेको ती नेताले बताए। उनको भनाइलाई उद्घृत गर्दै भने, ‘जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अस्थिर बनाइएको छ। यसले काम गर्न गाह्रो भएको छ। जनतलाई अपजस हामीलाई दिइरहेका छन्।’
केही समयअघि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय सरुवा गरेर पठाइएका सचिव खगराज बरालको कामबाट समेत उपप्रधानमन्त्री यादव सन्तुष्ट छैनन्। उनले पार्टीको बैठकमा भन्ने गरेका छन्, ‘उहाँले शिक्षामै राम्रो गर्नुहुन्थ्यो होला। स्वास्थ्यमा उहाँ पनि सिकारु हुनुहुन्छ । यसले काम गर्न मुश्किल भयो।’
प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनको सम्बन्ध बिग्रिएका कारण उनको मन्त्रालयका कतिपय फाइल प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद समक्ष उनकै पार्टीका अर्का मन्त्री इस्तियाक राईले लगिदिने गरेका छन्। पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही फाइल शहरी विकास मन्त्री राई मार्फत् प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद्मा पुगेका छन्। आफू निकटस्थहरुसँगको भेटमा मन्त्री राईले भन्ने गरेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री र उहाँको सम्बन्ध सुरुदेखि नै राम्रो छैन। उहाँका कतिपय फाइल मैले लगिदिनुपर्ने अवस्था छ।’
प्रधानमन्त्रीसँगको खराब सम्बन्धको असर बेला–बेला मन्त्रीपरिषदमा समेत देखिने गरेको छ। विदेश भ्रमणबाट फर्केपछि मन्त्रीहरुले क्याबिनेटमा चकलेट बाँड्नुपर्ने प्रचलन छ। जो विदेशबाट फर्के पनि सवै मन्त्रीलाई चकलेट बाँड्ने जिम्मा ‘कान्छो’ मन्त्रीलाई छ। यो मन्त्री परिषद्की कान्छी सदस्य भएका कारण खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री विना मगरलाई चकलेट बाँड्ने जिम्मेवारी छ। मन्त्री यादवले विदेश भ्रमण गरिरहे पनि चकलेट ल्याउन भने छाडेका छन्।
नेकपा कसरी पुग्याे फुटकाे संघारमा ?
दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ब्युँताउने तयारी हो संसद अधिवेशन अन्त्य सिफारिसको निर्णय?
नागरिकता विधेयकबाट नेकपाको लिंग पहिचान
ओली-प्रचण्डबीच चार घण्टाको संवादले पनि फुकाएन विवादको गाँठो पार्टी बैठकमै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट ओलीको राजीनामा मागेपछि दुई अध्यक्षबीच तिक्तता बढेको हो। प्रतिकारमा ओलीले बिहीबा... शुक्रबार, असार १९, २०७७
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको समझदारी लोकतन्त्रका लागि सुखद् छैन : पशुपति शमशेर जबरा पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच बाक्लिएको भेटघाट र संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने कदमप्रति स... शुक्रबार, असार १९, २०७७
गण्डकी प्रदेश : सुविधा विधेयक विधायन समितिमा गण्डकी प्रदेशसभाको शुक्रबारकाे बैठकले गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विध... शुक्रबार, असार १९, २०७७